Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu gubay Koonfur Afrika | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu gubay Koonfur Afrika
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu gubay Koonfur Afrika
Muwaadin Soomaaliyeed ayaa habeenkii xalay ahaa lagu dhex gubay goob ganacsi oo uu ku lahaa duleedka magaalada Pretoria ee Caasimada dalka Koonfur Afrika.
Safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika Danjire Jamaal Barrow ayaa sheegay kooxo Burcad South-African ah in shaqsigaasi ay ku dhex gubeen goobtiisa ganacsi oo ku taala magaalada Pretoria.
Iaa hadda lama sheegin magaca qofka la gubay iyo Da’diisa inta ay la egtahay, maadaama weli ay socdaan baaritaanada la xiriira falkan, Booliskana ay ku daba jiraan raggii weerarka geystay.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi oo arrntan aad uga dhiidhiyay ayaa ka codsaday Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre in ay wax ka qabtaan dilalka iyo dhaca lagu haayo.
Soomaalida ku sugan gudaha dalkaasi oo tiro ahaan lagu sheegay in ay yihiin ku dhowaad Konton Kun (50,000) oo Qof, ayaa la sheegay in ay yihiin kuwo u nugul dhibaatooyinka ka soo gaara dalka Koonfur Afrika
Marka laga soo tago dilalka qorsheysan ee Muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dhaca loo geysanayo goobohooda ganacsi ayaa hadana waxa ay dhibaatooyin ku qabaan helida sharciga Dal ku jooga oo ay bixiso Dowladda dalkaasi.
Previous articleGuddoomiye Jawaari & wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Qaahira (Sawiro)
Next articleWafdi heer-sare ah oo ka socda Turkiga oo soo gaaray Muqdisho & xerada militari ee Turkiga oo la furayo